Ndịàmà Jehova nọ́ Mba Ndị Dị n’Oké Osimiri Pasifik
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Ọstrelia: Katuun a na-ese na bọọdụ isiokwu ya bụ Olee Otú E Si Amata Ezigbo Enyi?
MMADỤ OLE BI NA HA 40,642,855
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 98,353
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 66,022
Ọ Katara Obi Kọọrọ Ndị Ọzọ Gbasara JW.ORG
E nwere nwatakịrị nwaanyị dị afọ iri na abụọ n’Ọstrelia aha ya bụ Emily. Otu ụbọchị onye nkụzi ya kụziiri klas ha uru mmadụ imeta ezigbo ndị enyi bara. Nke a mere ka Emily gosi ya vidio anyị isiokwu ya bụ Olee Otú E Si Amata Ezigbo Enyi? Mgbe onye nkụzi ha mechara gosi ụmụ klas ya vidio a, ha gere ntị nke ọma. Mgbe ha lechara ya, ha ji otu awa kwurịta gbasara ya. Onye nkụzi ha gosikwara klas ndị ọzọ vidio a. Emily gwaziri onye nkụzi ha na ụmụ klas ya gbasara jw.org. O kwuru, sị, “Jehova mere ka m kata obi gwa ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ ibe m gbasara jw.org. O nyeere m ezigbo aka.”
Ihe Ndị Mere n’Ebe E Gosiri Ngwá Ahịa n’Ime Ime Obodo
O were ndị nkwusa ise awa itoolu tupu ha eruo n’ebe a na-egosi ngwá ahịa n’obodo Sụaị dị́ na Timọ-Lest n’ihi na okporo ụzọ ya bụ ugwu ugwu. Ha dowere akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị. Ọ tụrụ ndị bịara ebe ahụ ha dowere akwụkwọ anyị n’anya ịhụ akwụkwọ anyị n’asụsụ Timọ-Lest iri na abụọ. Ihe kpatara ya bụ na e nweghị akwụkwọ ọ bụla n’ụfọdụ n’ime asụsụ ndị ahụ, ụfọdụ abụrụ naanị akwụkwọ ole na ole ka e nwere na ha. Mkpu pụrụ otu nwaanyị n’ọnụ mgbe ọ hụrụ isiokwu otu broshọ anyị. Ọ sịrị, “Ihe a bụ asụsụ m!” Ihe a bụ nke mbụ ọ na-ahụ akwụkwọ e dere n’asụsụ ya bụ́ Bunak. Naanị abalị anọ ndị nkwusa ahụ nọrọ ebe ahụ, ha nyefere akwụkwọ dị́ puku anọ, narị ise na iri asaa na otu. Ọtụtụ ndị gwakwara ha ka ha na-abịa amụrụ ha Baịbụl n’ụlọ ha. Ọtụtụ n’ime ha ahụtụbeghị Ndịàmà Jehova. Ụmụaka nọ ọdụ ọtụtụ awa lee fim Bụrụ Enyi Jehova n’asụsụ Tetun Dili. Ụfọdụ ụmụaka butedịrị abụ anyị ụfọdụ a bụrụ na ya n’isi ma jiri obi ụtọ na-abụ ha.
Timọ-Lest: Ebe ụmụaka na-ele vidio anyị ndị sí na Bụrụ Enyi Jehova
“Akwụkwọ Ndị A Bụ Nnọọ Ihe Ụmụ Akwụkwọ Anyị Chọrọ”
Nwanna Brian na nwunye ya Roxanne, bụ́ ndị ozi ala ọzọ rịọrọ ka e nye ha ikike ịna-edowe akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’otu ụlọ akwụkwọ kọleji dị́ n’agwaetiti Palawụ. Ha gakwuuru onyeisi kọleji ahụ ma gosi ya otu vidio anyị dị́ na jw.org nke kwuru gbasara idowe akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo. Ha nyekwara ya akwụkwọ anyị ụfọdụ ha chọrọ idowe n’ihe ahụ a na-akwagharị akwagharị. Onyeisi ahụ gwara ha na o nwere onyeisi ọzọ ha ga-ahụ tupu e nye ha ikike. Mgbe ha hụchara onyeisi ahụ, ọ gwara ha bịaghachi ka ha na onyeisi nke atọ hụ.
Nwanna Brian kwuru otú nnọkọ ha na onyeisi nke atọ ahụ si gaa. Ọ sịrị, “Mkparịta ụka anyị gara siriri werere. Ma ọ gwara anyị gaghachi na nke onyeisi mbụ ahụ anyị na ya hụrụ. Mgbe anyị gaghachiri, a gwara anyị dee akwụkwọ ozi anyị ji na-arịọ ka e nye anyị ikike idowe akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’ụlọ akwụkwọ ahụ. Ime otú ahụ bịara gwụwa anyị ike n’ihi na ọ dị anyị ka hà ji anyị egwu egwuregwu. Ma, anyị mechara dee akwụkwọ ozi ahụ.”
Palawụ: Nwanna Nwaanyị Roxanne na di ya Brian na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kwurịtara okwu nke ọma mgbe ha dowere ihe a na-akwagharị akwagharị e tinyere akwụkwọ anyị n’ebe dị́ nso n’otu ụlọ akwụkwọ kọleji
Mgbe e mechara, Nwanna Brian na nwunye ya gaghachiri na nke onyeisi nke atọ ahụ. Ha bu n’obi na ọ gaghị enye ha ikike ahụ ha rịọrọ ka e nye ha. Nwanna Brian kwuru, sị: “Ọ tụrụ anyị n’anya mgbe onyeisi ahụ gwara anyị na ọ gụọla akwụkwọ ndị ahụ anyị wetara ma chọpụta na ha dị ezigbo mma. Ọ sịrị na akwụkwọ ndị ahụ bụ nnọọ ihe ụmụ akwụkwọ ha chọrọ.” Ha nyeziri Nwanna Brian na nwunye ya ikike ịna-edowe akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’ụlọ akwụkwọ ha.
Nwanna Brian kwukwara, sị: “Onyeisi nke abụọ ahụ gwara anyị na ha ga na-ebu ụmụ akwụkwọ ndị nke bi n’ụlọ akwụkwọ aga chọọchị ọ bụla ha chọrọ na Sọnde. O kwukwara na ‘ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ahụ chọrọ ịbịa ọmụmụ ihe anyị, ha ga-ebute ha.’ Ihe a o kwuru riri mụ na nwunye m ọnụ. Ọ bụghị naanị na ha meere anyị ihe anyị rịọrọ ha, ha gwakwara anyị na ha ga-eburu ụmụ akwụkwọ ha bịa ọmụmụ ihe anyị n’Ụlọ Nzukọ Alaeze.”
Ụbọchị mbụ Nwanna Brian na nwunye ya dowere akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị, ha nyefere akwụkwọ iri isii na ise, magazin asatọ, na broshọ iri na otu. Ha na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kparịtakwara ụka. Ma onyeisi nke abụọ ma onye nke atọ gwara Nwanna Brian na nwunye ya ka ha bịaghachi.
Ndị Bịara Ịzụ Ahịa Ekirie Vidio Anyị
E nwere otu nwanna nwoke aha ya bụ Lipson na-eje ozi n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị́ n’Agwaetiti Sọlọmọn. Otu ụbọchị o si ozi ọma na-alọta, ọ nụrụ abụ anyị n’ebe a na-ere ihe. Ọ chọrọ ịmata onye na-akpọ ya, n’ihi ya, ọ banyere n’ebe ahụ ma hụ ka ụmụaka na ndị okenye na-egere abụ nke 55 dị́ na vidio. Isiokwu ya bụ “Lee Ndụ Ebighị Ebi!” O so na vidio ndị e nwere na Bụrụ Enyi Jehova. Mgbe abụ ahụ kpọchara, onye nwe ụlọ ahịa ahụ sịrị ha na o nwere vidio ọzọ ọ chọrọ ka ha lee. O tinyeere ha vidio isiokwu ya bụ Izu Ohi Adịghị Mma. Mgbe ha lechara ya, ọ gwara ha niile ezukwala ihe ọ bụla n’ụlọ ahịa ya.
Mgbe ndị mmadụ na-ele vidio ahụ, ọtụtụ ndị batakwuru. N’ihi ya, onye nwe ụlọ ahịa ahụ gwara ha na ọ chọrọ itinyere ha abụ kacha atọ ya ụtọ. Ọ kpọghachiri abụ nke 55 ahụ. Mgbe abụ ahụ gwụrụ, o gosiri ha vidio anyị abụọ n’asụsụ brokin nke Agwaetiti Sọlọmọn. Vidio ndị ahụ bụ Olee Uru Ịmụ Baịbụl Ga-abara Gị? na Olee Otú Anyị na Ndị Mmadụ Si Amụ Baịbụl?
Agwaetiti Sọlọmọn: Ebe otu nwoke na-egosi ndị bịara ịzụ ya ahịa vidio anyị ndị dị na jw.org
Ọ na-esiri ọtụtụ ụmụ amaala Agwaetiti Sọlọmọn ike ịga n’Ịntanet n’ihi na ọ na-efu oké ego nakwa na ọ dịghị ebe niile. Ma onye nwe ụlọ ahịa ahụ, ọ bụ eziokwu na ọ bụghị Onyeàmà Jehova, na-egosi ndị bịara ịzụ ya ihe vidio anyị, sí otú ahụ na-eme ka ha nụ eziokwu.
Ọ Hụrụ Aha Chineke n’Otu Akwụkwọ
N’ụbọchị Mọnde ọ bụla, otu di na nwunye na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’obodo Numea, nke bụ́ isi obodo Niu Kaledonia. Otu ụbọchị, otu nwaanyị ji ihere bịa n’ebe ahụ were akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? n’ekwughị okwu ọ bụla. Mgbe ihe dị ka nkeji iri atọ gachara, o ji akwụkwọ ahụ bịaghachi ebe ahụ. O mepere akwụkwọ ahụ tụọ ebe e dere Jehova aka ma jụọ di na nwunye ahụ, sị, “Ùnu hụrụ ihe a, ọ bụ ya bụ aha Chineke? Kemgbe ọtụtụ izu, m na-eme nchọnchọ n’ọ́bá akwụkwọ ka m mata nke bụ́ eziokwu gbasara Chineke. Ma ozugbo m weere akwụkwọ unu baa n’ụgbọala m mepee ya, ihe mbụ m hụrụ bụ aha Chineke, bụ́ Jehova. Ọ bụ ya mere m ji bịaghachi ka m kelee unu.” Ya na di na nwunye ahụ kparịtara ụka nke ọma, ha agwa ya gaa n’ihe odide ntụkwasị gụọ isiokwu bụ́ “Aha Chineke—Otú E Si Eji Ya Eme Ihe na Ihe Ọ Pụtara.” Nwaanyị ahụ kwuru na ya chọrọ ibu ụzọ mee nchọnchọ n’ọ́bá akwụkwọ. Ma ya amarala ebe ihe ahụ a na-akwagharị akwagharị na-adị n’ụbọchị Mọnde ọ bụla.